Wararka Maanta: Jimco, Sept 10, 2021-Heshiis horudhac ah oo laga gaaray colaadii deegaanka Kabxanley ee gobolka Hiiraan
Odayaasha beesha Xawaadle, ayaa sheegay in ay aqbaleen baaq nabadeed oo uu soo saaray Ugaas Yuusuf Ugaas Xasan Ugaas Khaliif, oo ah in meelaha shaqaaqooyinka ka dhaceen lagu wareejiyo ciiddamada milatariga iyo booliiska.
“Annagoo ah odayaasha beesha Xawaadle, waxaan diyaar u nahay nabad. Wax allaale wixii dhacay gogasha uu Ugaasku fidiyay ayaa looga wada hadli doonaa,” ayay yiraahdeen odayaasha Xawaadle.
Waxay odayaasha Xawaadle sidoo kale sheegeen in deegaanka Kabxanley ay ku wareegtay gacanta ciiddamada amniga, waxayna sheegeen in laga saaray maleyshiyaadka tuulada qabsaday.
Kabxanleey waa tuulo ka tirsan gobolka hiiraan waxaay magaalada Baladwayne ka jirtaa dhinaca waqooyi galbeed waxayna u dhowdahay xadka Itoobiya.
Boqolaal qoys ayaa dagaaladii ka dhacay halkaas uga barakacay, sidoo kale guryo badan oo dad shacab ah lahaayeen ayaa colaada awgeed dab loo qabad siiyay.
9/10/2021 12:06 PM EST